एनआरएनए अमेरिका क्षेत्रको संयोजकमा डा. विनोद शाहले उम्मेदवारी दिने « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एनआरएनए अमेरिका क्षेत्रको संयोजकमा डा. विनोद शाहले उम्मेदवारी दिने
आगामी अक्टोबर १५ देखि काठमाडौंमा हुने एनआरएनए विश्व सम्मेलनमा एनआरएनए अमेरिका क्षेत्रको संयोजक पदका लागि न्युयोर्क निवासी डाक्टर विनोद शाहले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । लामो समयदेखि एनआरएनए अभियान र सामाजिक कार्यममा सकृय रहदै आएका शाहले विश्वब्यापी एनआरएन सुदृढिकरणका लागि समावेशिता र एकताको नारा सहित उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् ।
एकदशकदेखि एनआरएनए संस्थामा आबद्ध डाक्टर शाह २०१० मा एनआरएन अमेरिकाको कोषाध्यक्ष भए । दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष रहेका शाह सन् २०१३ देखि सन् २०१७ सम्म दुईकार्यकाल एनआरएनए आईसीसी सदस्य रहे । सन् २०१७ देखि एनआरएन अमेरिकाको सल्लाहकार रहेका शाहको एनआरएन अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
त्यसपछि सन् २००४ मा उनले न्युयोर्ककै अल्बर्ट आइन्स्टाइन युनिभर्सिर्टीमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको जागिर पाए । युनिभर्सिटीको एउटा विभागमा निर्देशकको जिम्मा समेत पाए उनले । युनिभर्सिर्टीमा काम गर्दा गर्दै उनले सन् २००८ मा न्युयोर्कको योंकर्समा आफ्नै मेडिकल स्थापना गरे । अहिले उनले न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा पनि आफ्नै मेडिकल संचालन गरे ।
सन् १९९८ मा विहारको दरभंगामा डाक्टर विनोद शाहले सुजाता शाहसंग परम्परागत विहे गरेपछिका वर्षहरुमा शाहको जीवनमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । सुजाता पनि पेशाले डेन्टिस्ट हुन् । पेशा मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि शाहलाई श्रीमतिको सहयोग लिन सजिलो भयो । श्रीमतिको सहयोगबाट उनले सामाजिक कार्यमा समय निकाल्न भ्याइरहेका छन् । छोरा प्रशन्न शाह र छोरी राधिका शाहका पिता विनोद शाहले भविश्यमा नेपालमा गएर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कृयाशिल हुने योजना बनाएका छन् ।
उनी भन्छन् –“मानवीयताको सम्मान नै सबैभन्दा ठूलो महानता हो । ”